गगनको सिंह र निधिलाई प्रश्न : त्यो ६ घण्टाभित्र के भयो र बोली फेरियो ? - केन्द्र खबर
गगनको सिंह र निधिलाई प्रश्न : त्यो ६ घण्टाभित्र के भयो र बोली फेरियो ?
२०७८ मंसिर २९ १६:५१
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार रहेका गगन थापाले प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले नेतृत्व परिवर्तनको लागि भएको समझदारीमा भइरहँदा त्यो ६ घण्टामा के भयो र बोलि फेरियो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य रहेको भन्दै १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धामा उत्रेका सिंह र निधिले मत कम आएपश्चात देउवालाई नै समर्थन गरेका थिए।
थापाले सोही प्रसंगमा संस्थापनइतर समुह बीच भएको समझदारीबाट अचानक किन बोली फेरियो भन्दै उनले पश्न गरे । उनले भने,‘दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा त्यो बीचको ६ घण्टामा के भयो ? र नेतृत्व परिवर्तनको आफ्नै अडानबाट फर्केर पुरानै नेतृत्व छान्न पुग्नुभयो ?यसको स्पष्ट जवाफ यहाँहरुले कुनै दिन दिनुपर्नेछ ।
थापाले आफूहरु आफ्नो विचार र आफ्ना अभिव्यक्तिमा स्पष्ट भएको पनि बताए । उनले आफुले पहिले देखिनै नेतृत्व परिवर्तन चाहेको भन्दै त्यो यसपाली सम्भव नभए पनि निकट भविष्यमा सम्भव हुने अपेक्षा राखे ।
पार्टीको हितमा नवनिर्वाचित शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गर्ने र गलत कुरामा संघर्ष गर्ने थापाको भनाई थियो । उनले भने, ‘देउवाले पार्टीको हितमा काम गर्नुभयो भने हाम्रो सहकार्य उहाँसँग हुन्छ । उहाँ जहाँ चुक्नुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो संघर्ष हुन्छ ।’